ईन्द्रेणिका टिका सानुको यो भिडियो हेरेर नरुने कोहोलार ? -भिडियो - SudurSanchar
ईन्द्रेणिका टिका सानुको यो भिडियो हेरेर नरुने कोहोलार ? -भिडि
काठ्मान्डौ- टिका सानु भन्ने बित्तिकै पछिल्लो समयमा सबैको ओठमै गुञ्जिराख्ने नाम हो, किन कि टिका सानुले गयका हरेक गितहरु सबैले गुनगुनाउदै आउनु भयको छ। इन्द्रेणी संगै धेरै स्थानमा लाइभ दोहोरी र अफिसीयल गितहरु समेत गायर निकै नै चर्चामा छिन यतिबेला टिका सानु।
पछिल्लो समय टिका सानु ले आफ्नै युट्युब बाट समेत धेरै गितहरु सबैमाझ पस्किदै आयकि छिन। टिका सानुको बिगत सम्झीने हो भने सायद जो कसैलाई पनि रुहाउछ त्यो विगतले यति धेरै मेहनत गरेर आयकि टिकाको बारेमा केहि नया कुरा आउदा समेत धेरैले चासोसमेत दिने कुनै नौलो कुरा नहोला।
त्यस्तै टिका सानुको बारेमा जान्न र बिझ्न अनि टिका सानुबारे केहि नौलो कुरा आउदा हेर्न चाहने दर्शक तथा उनका सुभचिन्तकहरु समेत निकैनै हुनुहुन्छ। भर्खर तिज सकिय संगै दसैं बिशेष गितहरु अहिले बजारमा आउने क्रम चल्न थालेको छ। त्यस्तै गरेर टिका सानुको मार्मिक अभिनयमा रहेको दसैं बिशेसकै गित गयको बर्ष पनि एउटा गित बजारमा आयको थियो।
जुन गीतमा समेत टिका सानुको अभिनयले गर्दा सायद नरुने कोहि हुदैन होला। जुन गीतमा टिका सानुको आसुले गर्दा धेरैलाई भाबुक समेत गराउदै आयको देख्न सकिन्छ। बिहे भयको मैना दिनमै श्रीमान् विदेश गयपछिको पिडाहरु उक्त गीतमा प्रस्तुत गरीयको छ।
कृश क्षेत्री र धनमाया नेपालीको आवाजमा रहेको गित “प्रदेशी र घरबेशी” गीतीसंग्रहमा सब्द क्रिश क्षेत्रीको रहेको छ भने लय धिराज नेपालि श्रेष्ठले तयार पार्नु भयको छ। त्यस्तै गरेर उक्त गीतको संगीत संयोजन तिलक ओलीले गर्नुभयको हो। जुन गीतको भिडियो निर्देशन मान्सिङ्ग खड्काले गर्नु भयको थियो भने छायांकन सागर गौतमले गर्नु भयको हो।
त्यस्तै गरेर भिडियोमा अभिनय टिका सानु, मान्सिङ्ग खड्का, क्रिश क्षेत्री, धनमाया नेपालि, तिलक साही ठकुरी, बिक्रम आचार्यले गर्नु भयको छ। त्यस्तै उक्त भिडियोलाई सम्पादन राजकुमार मगरले गर्नु भयको हो। भिडियो हेर्नुहोस
छत्र शाही र काजल जोशीको ‘हाम्रो जोडी जम्छ ‘ गीत युटुवमा हिट (भिडियो सहित)
दलालबाट विदेशमा बेचिएर उद्दार भएकी चेलीको दर्द्नाक कथामा ( रुवाउने भिडियो हेर्नुहोस् )
चरी जेलैमा पछि विष्णु माझीको अर्को नयाँ गीत “यथार्थको जिन्दगी” -भिडिओ
२ बर्षपछि अनिताले दशैँ टीका लगाइन , टीका लाउदा धरधरि रोइन सबैको रु’वाबासि ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
गुल्मीमा सुरुमा भेटिएको ठाउबाट सचिन परियारले मर्नेगरी हँसाए, यसरी रातारात भएका थिए भाइरल, अझै नि उस्तै हसाउन खप्पिस हेर्नुस
टीका लाउदा यसरि धरधरि रोएकि अनितालाई भेट्न घरमै आए स्कुल पढ्दाका साथि ,यसरी भलाकुसारि गरिन् (हेर्नुस् भिडियो ) October 19, 2021
आहा ! बिदेशी घानाका युवक र नेपाली चेलि बुढाबुढिले यसरी मनाए दशै (हेर्नुस् भिडियो) October 19, 2021
छत्र शाही र काजल जोशीको ‘हाम्रो जोडी जम्छ ‘ गीत युटुवमा हिट (भिडियो सहित) October 19, 2021
दलालबाट विदेशमा बेचिएर उद्दार भएकी चेलीको दर्द्नाक कथामा ( रुवाउने भिडियो हेर्नुहोस् ) October 19, 2021
चरी जेलैमा पछि विष्णु माझीको अर्को नयाँ गीत “यथार्थको जिन्दगी” -भिडिओ October 19, 2021
२ बर्षपछि अनिताले दशैँ टीका लगाइन , टीका लाउदा धरधरि रोइन सबैको रु’वाबासि ( भिडियो सहित हेर्नुहोस ) October 19, 2021
सचिन परियारको घर गुल्मीमा पुग्दा बाउ छोराले थाले यस्तो काम, तेजेन्द्रले महिनाको लाखौ कमाउदै नया व्यापार सुरु गरे हेर्नुहोस October 19, 2021
गुल्मीमा सुरुमा भेटिएको ठाउबाट सचिन परियारले मर्नेगरी हँसाए, यसरी रातारात भएका थिए भाइरल, अझै नि उस्तै हसाउन खप्पिस हेर्नुस October 19, 2021
काजल जोशी र कलम शाहिको दोहोरी सुनेर सबैजना बेहोस, हाँसो रोक्न कसैले सकेन, तपाईं पनि सक्नु हुन्न। October 19, 2021
आहा ! दशैमा यसरी घर रङ्गाए बिनोदले ,यसरी खेत जोते, अनितालाई यसरी गित गाएर हँसाए (हेर्नुस् भिडियो) October 18, 2021